Faahfaahin socdaalkii Ra’isalwasaaraha Turkiga ee Muqdisho (Sawiro) – SBC
Faahfaahin socdaalkii Ra’isalwasaaraha Turkiga ee Muqdisho (Sawiro)
Posted by editor on August 19, 2011 Comments
Ra’isalwasaaraha Turkiga Rejep Tayyip Erdogan & wafdi balaaran oo uu hogaaminayo ayaa maanta socdaal taariirkhi ah ku tagey magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey.
Wafdigan oo ka koobnaa 70 xubnood waxaa ka mid ahaa wasiiro, xildhibaano, Fanaaniin, ganacsato & Dhakaatiir waxaana uu ahaa wafdihii ugu balaarnaa ee soo booqda Muqdisho tan iyo dhicistii xukuumada Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1991-kii.
Ra’isalwasaare Ergodan waxaa wafdigiisa ka mid ahaa kuxigeenkiisa Rajab Bozdog, wasiirka arimaha dibada Ahmet Davutoglu, wasiirka caafimaadka Wasiirka Caafimaadka Dr. Recep Akdağ, wasiirka Beeraha Cuntda Mehdi Eker, wasiirka Haweenka Mrs. Fatma Sahin, sidoo kale waxaa ka mid ahaa xubno ka mid ah Baarlamanka wadanka & ganacsato.
Qoyska Ra’isalwasaare Erdogan ayaa sidoo kale wafdiga ka mid ahaa gaar ahaan xaaskiisa Emena Erdogan & sadex ilmood oo ay dhaleen oo kala ah laba gabdhood oo lagu kala magacaabo Sumaya & Isra & wiil lagu magacaabo Bilaal waxaa Isra la socdey saygeeda.
afdiga la socda ra’iisul wasaaraha dalka Turkey Recep Tayyip Erdogan oo isugu jira wasiirro, xildhibaanno, ganacsato iyo fannaaniin Turki ah ayaa noqonaya kuwii ugu ballaarnaa ee yimaada Soomaaliya tan iyo 1991-kii oo ay dhacday dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
Afar fanaan oo ka mid ah fanaaniinta sida weyn looga yaqaan wadanka Turkiga ayaa sidoo kale ka mid ahaa wafdiga kuwaasi oo lagu kala magacaabo Ashda,Pekan,Sabtab iyo Arenar.
Sidoo kale wafdiga waxaa la socdey 40 saxafiyiin caalami ah oo loogu tala galay inay tabiyaan socdaalka Ra’isalwasaaraha Turkiga.
Wafdigan ayaa waxaa keenay saddex diyaaradood oo mid ka mid ah uu dhaawac gaaray kaddib markii ay baalkeeda midig ku dhufatay dhulka xilligii ay cago-dhiganaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Ciidamo gaar ah oo la socdey Ergodan
Ciidammo gaaraya 100-askari oo si gaar ah u tababaran ayaa la socda wafdiga, kuwaasoo aad u ilaalinaya ammaanka ra’iisul wasaaraha iyo wafdigiisa, waxaana ciidamadan ay ku hubeysan yihiin hub casri ah iyadoo wafdiga ay ku tageen goobihii ay booqdeen gaadiid caadi ah oo aysan xabbadu karin.
Ra’isalwasaaraha Turkiga ayaa booqday laba xero oo ku yaalla degmooyinka Wadajir iyo Howlwadaag ayaa u qaybiyay dadkaas gargaar isugu jiray cunno nafaqeysan, lacag iyo dawo, isagoo wareystay dadka qaarkood weydiiyayna xaaladdooda iyadoo ay ka muuqatay wajigiisa murugo xooggan oo ku aaddan dhibaatada haysta barakacayaashii uu la kulmay.
Shir jaraa’id oo ay ku qabteen xarunta madaxtooyada Ra’isalwasaaraha Turkiga & Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa su’aalo kala duwan waydiiyey saxafiyiinta waxaana ka mid ahaa arimaha uu ka hadley arimaha gargaarka, taageerada dawlada & shacabka Soomaaliyeed, arimaha dagaalada ka socda dalka, Al-Shabaab, dib u hawlgalinta safaarada Turkiga ee Soomaaliya.
Ra’isalwasaaraha Turkiga oo la waydiiyey su’aal ku aadaneyd gargaarka loo fidinayo dadka barakacay ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee wadamada dariska ah wuxuu sheegay in dadkaasi ay sida ay ugu qabanayaan dadka wadanka gudihiisa ku sugan uu ugu qaban doono, wuxuu sheegay inay u dhisi doonto dawladiisu goobo ka wanaagsan meelaha ama xeryaha ay ku jiraan.
Sidoo kale wuxuu sheegay Ra’isalwasaare Erdogan in laga hirgalin doono Isbitaal goobaha ay ku jiraan dadka barakacayaasha ee ku sugan xeryaha barakacayaasha Muqdisho.
“Waxaan diyaar u nahay inaan wax walba oo aan awoodno u qabanno shacabka Soomaailyeed ee dhibaateysan, barakacayaasha aan soo arkay xaaladoodu aad ayay u darnayd,” ayuu yiri Erdogan oo sheegay in dhibaato ba’an ay ka jirto Soomaaliya.
Ra’isalwasaare Erdogan ayaa xeryihii barakacayaashii ku jiray xeryihii uu booqday wuxuu u qaybiyay raashin, lacag iyo dawooyin, isagoo dadka qaarkood xaaladdooda wareystay, waxaana booqashadiisan uu ugu talogalay inuu indhaha caalamka kusoo jeediyo xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliya, wuxuuna sheegay in xarumo quudin iyo Isbitaalo ay dhisi doonto xukuumadiisa.
Su’aal ku saabsan arimaha Al-Shabaab oo ay dagaal kula jira dawlada KMG ah waxa uu ka taageeyo dawlada Soomaaliya ayuu wuxuu sheegay in loo baahan yahay in Soomaalidu ay wadahadalaan oo ay dalkooda dhistaan, wuxuuna xusey in Al-Shabaab ay ka mid yihiin wiilal Soomaaliyeed, sidaasi darteed looga baahan yahay inay la hadlaan dadka Soomaaliyeed ayna wax la qaybsadaan dadkana ayna u soo jeestaan dhismaha dalkooda.
Safaarada Turkiga ee Muqdisho
Ra’isalwasaare Erdogan wuxuu sheegay in dib loo furi doono safaaradii Turkiga ee Soomaaliya wuxuu sheegay in uu wafdiga la socdo safiirka dawlada Turkiga ee Soomaaliya isla markaana taasi ay kor u qaadi doonto arimaha xiriirka labada wadan.